सेक्सअघि के नखाने ? हरेक जोडीले स्वास्थ्यको लागी पनि जान्नै पर्ने जानकारी ! « Sajha Page
सेक्सअघि के नखाने ? हरेक जोडीले स्वास्थ्यको लागी पनि जान्नै पर्ने जानकारी !
प्रकाशित मिति: January 6, 2018
रातो मासु हेभी डाइट हो। रातो मासु खाएपछि पच्न लामो समय लाग्छ। रेड मिट खाएपछि निन्द्रा लाग्छ, शरीर आलस्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सेक्स गर्नु त्यति आनन्ददायक हुँदैन।
ब्रोकाउली र काउलीमा पनि गेडागुडीमा जस्तै सुगर पाइन्छ। जुन पच्न समय लाग्छ। अमेरिकाको जोन हप्किन्स अस्पतालले गरेको एउटा अनुसन्धानअनुसार यस्तो सुगर पचाउन शरीरले मिथेन रिलिज गर्नेगर्छ। सेक्सका क्रममा उपयोगी हुने मिथेन ग्यास निस्कासन हुनु राम्रो होइन।
सेक्समा लीन हुनअघि लसुन खानु हुँदैन। यसले मुख र श्वासलाई दुर्गन्धित बनाउँछ, साथै पेट पनि फुलाउँछ। फुलेको पेट र दुर्गन्धित श्वासले सेक्सलाई आनन्ददायक बनाउन सक्दैन।
पनिर धेरैजनाको मनपर्ने खान्कीमा पर्छ। तर, सेक्सअघि यो पनि भरसक खानु हुँदैन। पनिरको स्वाद र गन्ध मुखमा लामो समयसम्म रहन्छ। यसले यौन उत्तेजनालाई शान्त गर्छ। त्यसैले सेक्सअघि पनिर खानु त्यति राम्रो मानि”दैन।
गेडागुडी चाँडै पच्दैन। गेडागुडी खानाले ग्यास बनाउँछ। सेक्सको मजालाई ग्यासले कम गरिदिने भएकाले सेक्सअघि भरसक गेडागुडी खानु हुँदैन। साथै गेडागुडीमा पाइने सुगर पच्न समय लाग्छ। अपच पेट सेक्सका लागि अनुकूल हुँदैन।
चिज पनि पच्न समय लाग्छ। यसले ग्यास बनाउने र पेट ढुस्स बनाउने गर्छ। यस्तो पेट सेक्समा लिन हुन उपयोगी हुँदैन।
तारेको आलुमा फ्याट बढी हुन्छ। यसले शरीरको रक्तसञ्चारलाई सुस्त बनाउँछ। तर, सेक्समा रक्तसञ्चार तीव्र हुनु राम्रो हुन्छ। साथै तारेको आलुमा नुनको मात्रा कम हुने भएकाले यसले उत्तेजना घटाउने र शरीरलाई अल्छी महसुस गराउने गर्छ।
पुदिनाले मुखलाई वासनादार बनाए पनि यसले उत्तेजना घटाउने काम गर्छ। पुदिना खानाले शरीरमा टेस्टोस्टोरोन हर्मोनको मात्रा घट्छ। टेस्टोस्टोरोन पुरुषको यौन हर्मोन भएकाले यसको मात्रा घटनाले दुवैले यौनको चरम आनन्द प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्।
चुइङ्गम खानाले मुख फ्रेस हुन्छ र यसले चुम्बनलाई भव्य बनाउन सहयोग गर्छ। तर, सेक्सका लागि चुइङ्गम चपाउनु राम्रो मानिँदैन। मायो क्लिनिकले गरेको एउटा अध्ययनले चुइङ्गम चपाउँदा निलिने हावाले ग्यास फर्मेसन गराउने र यसबाट सेक्सको मुड कम हुने तथ्य पत्ता लगाएको थियो।